Macluumaad laga yaabo markii ugu horeysay inaad maqasho oo ku saabsan filimka ay Hollywoodka ku faanaan ee The Matrix. – Filimside.net
Macluumaad laga yaabo markii ugu horeysay inaad maqasho oo ku saabsan filimka ay Hollywoodka ku faanaan ee The Matrix.
=Sanadkii 1999kii waxaa tiyaatarada Mareykanka iyo mida caalamkaba gilgilay Filimka Actionka iyo Khiyaaliga isku darsaday ee The Matrix.
=Sheekada Filimka waxaa qoray labo gabdhood oo walaalo ah una dhashay wadanka mareykanka waxaana lagu kala magacaabaa Lana Wachowskis iyo Lilly Wachowskis sidoo kalana isla ayaga ayaa filimka Director ka noqdeen.
=Gabdhahaan ayaa markey sheekada Filimka u bandhigeen shirkada Filimka maalgalin laheyd ee Warner Bros waxay dalbadeen miisaaniyad dhan 80 Million oo Dollar si ay filimka ugu sameeyaan hase yeeshee waxaa loo sheegay in lasiin doono kaliya 10 Million.
=Balse markii ay sameeyeen muuqaalkii ugu horeeyay ee Filimka kaasoo mudadii uu socday ay aheyd 10 daqiiqo isla markaasna ay u bandhigeen shirkadii filimka maalgalineysay aad ayay ula yaabeen iyagoona isla markiiba nalka cagaaran u taagay lacagtii ay rabeena miiska u saaray waayo qaabka filimka ayaa aad usoo jiitay.
=Filimka waxaa aktarka koowaad ka ah Keanu Reeves asigoona matalaayo doorka Neo (Thomas A.Anderson) waxaana xusid mudan in doorkaasi iska diideen aktaro waaweyn misna caan ah sida Will Smith, Johnny Depp, Nicolas Cage, Brad Pitt iyo kuwa kale.
=Filimkaan waxaa lagu jilay gabi ahaantiisaba magaalooyinka San Francisco iyo Sydney oo ku kala yaalo United State iyo Australia.
=Tan ugu yaabka badan waxay tahay in 54% hadalada uu ku hadlaayo Neo filimkaan ay yihiin suaalo ku saabsan The Matrix inuu wax ka ogaado .
=Dhamaan jilyaasha Filimkaan waxay wada xiranyihiin ookiyaalaha qoraxda loogu talo galay iyadoo Groupka doonayo iney Machineska ka xoreeyaan dhulka ay wataan ookiyaalaha noocaha mustadiilka ah halka Agent Smith iyo kuwa la shaqeeyana ay wataan ookiyaalo nooca wareegsan, waxaana xusid mudan in midkasta oo jilyayaasha kamid ah ookiyaalkiisa si khaas ah loogu sameeyay.
=Aktarka filimka Keanu Reeves intuusan filimkaan jilistiisa bilaabin dhowr bil kahor wuxuu maray qaliin dhanka qoorta ah kadib dhaawac kasoo gaaray lafdhabarta qoorta ku xiriirsan.
Dhaawacaan ayaa Keanu Reeves ku haayay dhibaato qalal asigoonan awoodi Karin mararka qaar inuu dhaqaajiyo qeybta hoose ee jirkiisa.
Markii uu filimka bilaabanayay wuxuu ku jiray soo kabsasho waana sababta keentay in bilowga filimka uusan Neo wax Action iyo dagaal sameyneynin.
Waxaa Aqrisay 1,406